Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावली सहमतिमै पारित गर्न कांग्रेसको आग्रह – Emountain TV
काठमाडौं, २ जेठ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली सहमति मै पारित गर्न सत्ता पक्षसँग आग्रह गरेको छ । काँग्रेस संसदीय दलको बुधबार अपरान्ह सिंहदरबारमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली सहमतिमै पारित गर्न सत्तापक्षसँग आग्रह गरेको हो ।
सत्तारुढ एमालेले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरुलाई निलम्बन गर्नुपर्ने अडान लिइरहेका बेला काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले अडान छोडेर सहमतिमै सो प्रस्ताव पारित गर्न आग्रह गरेको छ ।
बैठकले अभियोग पुष्टि नभई सांसदहरुलाई निलम्बन गर्न नहुने निष्कर्ष समेत निकालेको छ । सहमति अनुसार नै दुवै सदनको नियमावली पारित गर्न सत्ता पक्षलाई आग्रह गरिएको काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिए ।
उनले अभियोग लागेका सांसदहरुलाई सेवा, सुविधा नदिने तर आरोप पुष्टि नभई उनीहरुलाई निलम्बन गर्न नहुने पार्टीको अडान पनि दोहो-याए ।
काँग्रेसले सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा ठोस धारणा तय गर्न विज्ञहरुसहितको समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे प्रभावकारी रुपमा संसदमा प्रस्तुत हुन सांसदहरुलाई प्रशिक्षित गर्नेगरी विज्ञहरु सहितको समिति बनाउने निर्णय गरिएको खाँडले बताए ।
सरकारले आगामी जेठ ७ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनेछ । सोही सम्बन्धमा पार्टीको ठोस धारणा तय गर्न काँग्रेस संसदीय दलले आवश्यक गृहकार्य गर्ने निर्णय गरेको हो ।